Aiza no hiatrehantsika latabatra maoderina? | Avy amin'ny Linux
tsy tia | | Fisehoana / personalization, Fitsinjarana, GNU / Linux
Farany ary tsy misy fieboeboana be, nidina ny systemd en ArchLinux. Hafatra iray fotsiny ao amin'ny lisitra fandefasana mailaka no ampy hampilazana amintsika fa vita ny fiovana, farafaharatsiny ho antsika rehetra izay mampiasa birao feno amin'ity fizarana ity. Mandeha miova tsikelikely ireo birao misy antsika, mihombo hatrany ary mihalavitra hatrany amin'ny birao nentim-paharazana. Misy fanamarinana ve izany? Tena mahasoa ve ity?
Ampy izay ny teny voalaza momba an'io lohahevitra io, saingy toa vao mainka ilaina izany. Satria tsy niafina tao ambany vatolampy ianao tato anatin'ny taona vitsivitsy (na miasa mangina avy amin'ny Red Hat Enterprise Linux) ho fantatrao izany nanomboka teo GNOME Nankany amin'ny sampana 3 tamin'ny fivoarany izy, lasa adala daholo ny rehetra. Misy ny olona mahita an'io ho toy ny hetsika manampahefana, voan'ny sela finday.
Na izany aza, misy zavatra afaka amintsika. Fa maninona Inona no hitranga izao? Tokony handositra amin'ny horohoro ve isika, hitomany amin'ny fahanginana, na hamely latabatra eo an-dohan'ny mpamorona? Hiezaka hamaly ireo fanontaniana ireo amin'ny fomba fijeriko aho, satria tokony samy hanana ny heviny momba an'io olana io isika rehetra. Tamin'ny voalohany, avy eo?
1 Ny fampiraisana ny interface
2 Zava-dehibe ny fanavaozana
3 Inona no hitranga izao?
3.0.1 GNOME Shell
3.0.5 Mpitantana varavarankely sy tontolo iainana hafa
5.1 Filokana mankany amin'ny ho avy
5.2 Ary inona izao no ataoko?
Ny fampiraisana ny interface
Taona maro lasa izay dia nisy ny fifanolanana KDE sy ny fivoarany, miorina amin'ny Qt. Ady iray izay tsy nila niainan'ny maro amintsika izany ary hitantsika amin'ny Wikipedia (ny tantarantsika momba an'io karazan-javatra io) fa tsy dia misy dikany, zavatra taloha. Na dia efa nisy hafa aza fitaovam sary, ny fisaraham-bazana libertarian tamin'izany fotoana izany dia nanjary fampiroboroboana ireo safidy vaovao hafa hamahana ny filan'ny computing manokana, mifototra amin'ny fanoharana mahazatra amin'ny birao. Ny rehetra satria Qt no vanim-potoana rindrambaiko maimaim-poana. Izao izany, saingy mbola mitohy ny fisarahana.
Raha mandrapaha ny andiany 2.3 dia afaka miresaka momba ny GNOME sy ny KDE mitovy izahay ary afaka manolotra ny tsirairay ho solon'ny iray hafa miankina amin'ny toe-javatra na tsiro sasany, samy hafa be izao izy roa. Voalohany, satria niova haingana be ny sarisary amin'ny birao GNOME, ary faharoa, satria nandalo dingana mitovy amin'izany i KDE taloha kelin'izay. Samy mivoatra, fa amin'ny fahasamihafana lehibe misy ny GNOME a nanambara fanandramana. Ary tsy dia ratsy loatra izany.
Ny eritreritra ankapobeny momba GNU / Linux ary azo zahana amin'ny rafitra tsy Windows dia sarotra loatra, tsy mitovy, hafahafa ary tsy ho takatry ny mpampiasa izany. Tokony ho mora kokoa aza izany fizarana izany, zavatra tsy azo ampiharina intsony ary milaza amintsika momba ny tahotra goavambe ny terminal, toy ny hoe heverin'izy ireo ho fahatsiarovana ny lasa izany, zavatra iray izay tsy tokony hampiasaina intsony.
Io no idiran'ny GNOME vaovao, izay niaraka tamintsika nandritra ny vanim-potoana iray. Ny fametrahana ny GNOME dia hanome antsika tontolo iaraha-manana mirindra mankany aminy ary aminy irery ihany. Isika izay efa nanandrana ny kinova 3.6 dia mahita izany. Ny Nautilus vaovao dia tsy miova amin'ny mahazatra, mihena amin'ny asany (ny sasany tsy dia gaga loatra) ary amin'ny fampiasana tsara dia tsara, satria mifanaraka amin'ny tenany sy amin'ny Shell.
Ny coherence izay lazaiko dia toa sarotra takarina, saingy raha ny tena izy dia zavatra fototra izany. Mora azo alaina ohatra izany. Ankehitriny, ny menio tsy misy ilana azy taloha izay azonao tamin'ny fipihana ny anaran'ny fampiharana dia mampiditra asa vaovao. Ny sehatr'asa dia atao kely kokoa ary misy vitsy kokoa ny fanelingelenana, mitovy tanteraka amin'ny tanjon'ny tetikasa fototra.
OMS mbola tsy nanandrana izany fizarana izany, mbola ao anatin'ny dingana beta efa azony, azafady mba ataovy. Amin'izay ianao vao hahatakatra tsara izay holazaiko: efa lasa mifanaraka amin'ny tenany ny Elementary. Tamin'ny fanehoan-kevitra momba ny fisian'ny beta dia nisy olona niresaka ny famerenana ny menio manerantany ary namaly izy ireo fa izay tadiaviny. Marina izany, ary noho ny antony tena tsotra.
Ny rindranasa fanabeazana fototra dia tsy manana menus intsony noho ny fitaovana iray, izay manome antsika ny safidy ilaintsika rehetra. Betsaka no hieritreritra fa ny Elementary dia tsy inona fa ny fanoharana, fanahafana ny Mac OS; fa lasa lavitra kokoa izy ireo. Fantatr'izy ireo izay ataony. Mahatsapa ny fahitany manokana ny amin'ny tokony hatao izy ireo, mametraka ny fiorenany amin'ny fiheveran'izy ireo ny nofinofy.
Ary avy eo misy kanelina. Miaraka amin'ny fitsofana kaody dia manafina ireo izay tsy afaka intsony intsony izy noho io tadio fanandramana io. Manavao ihany koa izy ireo, saingy mitandrina kokoa noho ny fisehoany. Mikatsaka ny hahazo ny traikefa taloha izy ireo ary hanafaka antsika fampisehoana fa mahazo antsika ny GNOME.
Saingy ny ezaka rehetra dia mikendry ny fampiraisana. Tsy mitovy ihany ny fisehon'ireo rindranasa, fa mitovy ihany ny fahatsapany ary ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'izany. Io no fitoviana nandrasainay.
Zava-dehibe ny fanavaozana
Ireo fifanakalozan-kevitra vaovao an'ny about Inona ny endrik'i Pantheon, ny fampiasana CSS hanaingoana ny interface sy ny extensions azo ampidirina ho an'ny tranokala GNOME, ary ny fomba fiasa vaovaon'i KDE amin'ny QML dia tsiro amin'ny ho avy.
Zava-dehibe ny fanavaozana ary miseho amin'ny lafiny rehetra izany. Tao amin'ny GNOME 3 dia nahita fanavaozana ny GTK tsy mbola nisy toy izany isika teo aloha. Tsy afaka mifikitra amin'ny haitao mitovy intsony izahay (eny, miresaka aminao aho Xfce) noho ny antony tsotra iray: ny fahamaotinana. Ny fanandramana ataontsika anio dia miharihary fa hiteraka ekosistema tsara kokoa rahampitso; taorian'ny ady mahery vaika hahazoana ny fahamboniana amin'ny fanavaozana. Na dia tandindomin-doza aza izany zavatra kely izany, ahoana ny fisian'ny mpandray anjara maharitra iray manontolo amin'ny GTK ary ny GNOME ihany no mitazona azy, miaraka amin'ireo birao hafa mifototra amin'ity Toolkit mampiasa azy nefa tsy manohana.
Zava-dehibe ny fanavaozana ary tsy maintsy manohana azy isika. Izy io dia dingana maharary, nefa mahasoa.
Inona no hitranga izao?
Andao atomboka amin'ny fanombantombanana miharihary fa tena tiantsika tokoa. Hanangona ny faminaniantsika amin'ny alàlan'ny birao izahay mba hananantsika azy ireo ho mora azo sy maodely kokoa. Amin'izany fomba izany, ny tsirairay fambara tsy miankina amin'ilay teo aloha izy io ary ilay tsy tanterahina dia tsy hanary ny ambiny. Diniho eto, tsy mpanao majia aho na mpanambady bebe kokoa. Hanao andrana kely fotsiny aho eto. Hanome ahy antony na tsia ny fotoana.
Hanomboka himenomenona ny olona noho ny tsy fahafahany mampiasa rindranasa GNOME mahomby ivelan'ny tontolo iainana.
Ny fanjavonan'ny maody hianjera indray hiteraka fivoarana tsiranoka kokoa izany.
Hanana a sotro rovitra, famerenana an-tsoratra feno, na fomba fiasa vaovao hampivelarana fampiharana tena ilaina ao amin'ny GTK. Azon'izy ireo takarina, Inkscape, AbiWord, Glom, Gnumeric sy ny hafa. Hantsoina hoe: Vector, Text, Data y Numbers. Maharary be ity iray ity ary mifanome tanana amin'ilay voalohany.
Hanova zavatra ny GNOME OS. Saingy hahemotra imbetsaka izy io.
Ity rafitra miasa ity dia hitondra rafitra fametrahana fonosana sary tsy mitovy amin'ny iray fantatsika.
Hizara fizarana marobe izay handray azy ho tontolo misy anao.
Hiditra ao amin'ny repository ArchLinux [fanampiny] izy afaka 6 volana ho avy.
Hisy ny olana amin'ny fivoarany ary mety hiafara amin'ny fork.
Linux Mint dia hampidina ny fanontana MATE amin'ny tapaky ny 2013.
Very ny fahafahany lasa desktop mainstream, hivadika ho GTK 3 izy io amin'ny faran'ny taona 2013. toolkit.
Xfce dia hampivelatra fampiharana mitovy kokoa amin'ny tetikasa Elementary ary mety hahita akaiky na fanandramana miaraka amin'i Granite sy Vala isika.
Mety hahita isika a fivarotana plasmoid mitovy amin'ny efa nataon'ny GNOME rehefa miely patrana ny Qt Quick.
Plasma dia afaka mampiasa CSS amin'ny fiandohan'ny taona 2014.
Mpitantana varavarankely sy tontolo iainana hafa
Efa fantatrao fa tiako mpitantana varavarankely fa ny solosainako taloha ihany no ampiasako azy ireo, satria tsy afaka manohana biby goavambe toa an'i GNOME intsony. Ka ahoana no fiasan'izy io miaraka amin'i Debian stable, rehefa navoaka ny kinova miova 7 dia hanao fametrahana madio amin'ny i3 aho, izay atolotry ny rehetra. Fa amin'io iray io ihany.
Hitohy amin'ny Unity i Ubuntu. Nisy zavatra hafa nantenain'izy ireo ve?
Mpitantana varavarankely 3 no hafoina.
Tombantombana madio io ary tsy mifototra amin'ny angona azo antoka fa amin'ny fahitan'ny mpampiasa tsotra azy. Tsy manana fampahalalana aho hanamarinana ireo faminaniana ireo ary tokony hojerena fotsiny ho vokatry ny fanandramana eritreritra izany. Aza mino an'izany ary aza atao an-trano izany. Tsarovy, tombantombana.
Eny. Na dia atahorana hiseho be loatra amin'ny finday avo lenta aza, ny fampitambarana interface dia mahasoa antsika rehetra, na antitra na vaovao. Raha misy ny fiankinan-doha tsy dia mivaingana eo anelanelan'ny fampiharana rehetra, dia lasa mora kokoa ny zava-drehetra. Na dia tsy nandeha aza ny andrana nataoko niaraka tamin'ny GNOME Shell sy ny fianakaviako guinea pig, tsy midika izany fa tsy hahomby amin'ny olon-kafa izany.
Mampijaly ity dingana ity ary efa nitarika ny olona handao tanteraka ny GNU / Linux. Ary tsy manome tsiny azy ireo aho, fa mila miaritra ianao. Tapitra ny ratsy indrindra, na dia mety miomana ny hamely ahy noho izany fanambarana tsotra nataoko izany aza ny ho avy.
Ilaina izany ankehitriny satria ny rafitra rehetra dia mizotra amina dingana mitovy amin'izany ary fotoana volamena ho an'ny rindrambaiko maimaimpoana izany. Mandosira amin'izay fizarana raha tsy afaka mampiasa UI Maoderina intsony ianao!
Filokana mankany amin'ny ho avy
Aorian'ity lahateny ity dia mila milaza aho fa tsy hanao afa-tsy ny hanao fanamby amin'ny ho avy. Ho marina ve izay lazaiko? Efa mitranga ve izany ary tsy fantatro ny momba azy? Tena tsy haiko. Fotoana hafahafa ireto ary tsara kokoa ny mitandrina, fa ity lisitra ity dia manome antsika hevitra ny amin'ny faminaniana mialoha - na tsia - mety hisy an'ity tontolo ity. Ka izao no ataoko farany:
Ny GNOME dia ho birao lehibe indray ao anatin'ny 2 taona, ho an'ny kinova 4.4; raha mijanona ny fanisana. Ho hitantsika eo raha marina aho, na atelina sôkôla mafana aho. Amin'ny fotoana ijanonan'ny fonosana ao amin'ny Arch, dia hatsiaka eto.
Ary inona izao no ataoko?
Andraso eo. Tena tsara ny kanelina raha mila tontolo iainana GTK ianao ary tsy handiso fanantenana anao velively ny KDE. Xfce koa dia manome traikefa tsara, saingy mpandala ny nentin-drazana loatra. Ny miandry fotsiny ny ho avy. Ary ny zazalahy ve dia hahafinaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Aiza no hiatrehantsika latabatra maoderina?
97 hevitra, avelao ny anao
Araka ny nolazain'i Mel Gibson tao amin'ny Lethal Weapon, "Efa antitra loatra aho amin'ity sompitra ity."
Moa ve ianao tsy tonga hatramin'ny farany? amin'ny vokatra vita… aorian'ny 14 taona niadiana tamin'ny Linux dia hitako fa tsy nifarana mihitsy.
Tato ho ato dia tsy maintsy mieritreritra aho, mifanaraka amin'ny WIN sy OSX fa samy mihidy ao anaty tranony isika ary bla bla bla ... Ny fahalalahan'ny fahalalana ny GNU dia fomba iray hafa andevo ho an'ny mpampiasa mahazatra. Ny programa tsy miankina dia mihidy anao hahazo vola aminao, ara-dalàna, toy izany ny orinasa. Ny GNU dia mivarotra anao fa afaka amin'ny solosainao ianao nefa manameloka anao handalina mandritra ny androm-piainana ... Raha tianao izany na tsapanao fa tsara izany. Fa rehefa tsy manam-potoana na tsy dia tianao loatra ... Amin'ny farany dia miankina amin'ny fanokanana fotoana / fianarana na fanokanana vola izany.
Manome ny fahatsapana fa ny maodely tompony mihidy dia ny fanaraha-maso sy ny fahamendrehana (miresaka momba an'i Apple aho) ary ny Soft Libre dia CAOS, singa an'arivony tafangona toy ny meccano goavambe, izay misy zavatra foana hitodihana hahamety kokoa azy.
Mijanona ao anatin'ny fe-potoana antonony aho ... saingy hitako fa 10 taona eo ho eo dia tsy hanana faniriana hanohy hianatra intsony aho ... ary araky ny faminaniako azy ... dia manitra amiko fa any amin'ny OS X na ny mitovy aminy amin'ny clumsy. na angamba amin'ny distro an'ny ankizy na zavatra toy izany, tsotra kokoa noho i Ubuntu, nametra-pialana tamin'ny zava-misy fa raha misy tsy mandeha dia tsy ampiasaina ary dia izay.
Mandritra ny fotoana hanohizanay ny fianarana.
Azoko tsara ny tianao holazaina .. Indraindray dia misy zavatra mitovy amiko, saingy tsy fantatro, dia ho tonga amin'ny teboka iray izay toy ny Windows na Mac OS X ny GNU / Linux miaraka amin'ireo birao rehetra misy azy .. Raha ny marina, arakaraka ny fitaovana sy ny filàna anananao, dia efa misy ny fizarana izay manome anao izany fotoana izany.
Mieritreritra aho fa hanolotra an'i Mageia voalohany indrindra, na dia mampiasa Arch aza aho, indrindra fa manana ny ivon-toeran'ny fikirakirana, vondrom-piarahamonina matanjaka, tsingerin'ny fampandrosoana mba tsy fampijaliana mahazatra ny fanavaozana ary tena milamina.
Saingy tsy misy miraharaha…
Inona ny lahatsoratra tsara sy izay lazainao momba ny Mageia tena marin-toerana, fantatry ny vondrom-piarahamonin'izy ireo izay alehany sy fanohanana tsara isaky ny kinova.
Na io distro io ihany aza no niasa 100% tamin'ny netbook andiany Y.
Na dia mampiasa Chakra aza aho izao dia manana olana amin'izany, ka dia dinihiko ny fanovana.
Nametraka an'i Mageia aho hizaha toetra azy satria io no distro faharoa aorian'ny Mint araka ny Distrowatch; saingy tsy afaka nanamboatra ny wifi aho ary misy korontana hotadiavina (na angamba tsy haiko ny fomba hanaovana azy tsara) ka mbola misalasala aho ny hamela azy na hametraka Cinnamon 14 Nadia, na dia Handefa ny Elementary ao amin'ny x64 aho ary hanandrana, izany no tsara sy ratsy ary ratsy tarehy amin'ny Linux ... betsaka ny azo isafidianana ka lasa mifidy izay tsy ilaiko im-betsaka aho, satria ny fomba tokana hahafantarana raha mety aminao na tsia dia amin'ny alàlan'ny fametrahana sy fanandramana, raha tsy izany ny zavatra iainan'olon-kafa dia mifototra amin'ny solo-sain'izay mitsapa azy ary imbetsaka tsy mifanaraka amin'ny famaritana an'ilay anananao izany.
Jereo ny ivon-tranonkala Mageia na ny faritra ivon-toeran'ny fanaraha-maso ny fitaovana.
Misaotra, hanandrana azy farany aho, raha tsy mandeha… veloma Mageia.
Manandrana "rafi-pitabatabana" ho an'ireo izay mifantoka amin'ny fisorohana arak'izay azo atao fa miahiahy momba ny fikirakirany olana somary lalindalina kokoa ny mpampiasa noho ny fanamboarana birao kely sy gadget izay heveriko fa tsy dia mahalala fomba ary tsy mahalala fomba mihitsy.
Ny tadiavin'ny ankamaroan'ny olona dia ny fananana rafitra vonona hiasa ary tsy vonona ny hamboarina, mainka fa ny fametrahana azy io, tsy mila mianatra zavatra mihoatra ny fitantanana desktop sy ny famokarana ary ny rindrambaiko fialamboly izy ireo.
Ny olona te hianatra bebe kokoa noho ny mahatakatra ny fomba fikirakirana rindrambaiko soloina eo dia hisy foana, saingy tsy mahatonga azy ireo ho sarotiny kokoa na kely noho ny mpampiasa iray izay maniry rafitra hiasa na hilalao fotsiny.
DanielC, napetrako ny "system for clumsy" miresaka ny OS X mihoatra ny zava-drehetra, amin'ny heviny fa izy no mora entina kokoa, fa tsy windows. Hitako ihany koa fa ny sasany dia nametraka ny OS X sy ny windows tamin'ny kitapo iray ihany. Ary tsara fa tsy mitovy amin'ny fampiasana azy sy ny filaminana / fitoniana tsara kokoa izany ary tsy miteny koa isika. Miasa amin'ny masinina mihidy ny OS X ary voasedra miaraka amin'ny elanelany misy, izany no manelingelina ireo mpankafy GNU marobe fantatsika ny antony, fa izany indrindra no mahatonga ny rafitra hiasa toy ny famataran'ora. Win sy Linux dia tsy noforonina na notsapaina tamin'ny milina rehetra mety, izany fahalalahana fampiasana izany dia iray amin'ireo olany izay manery ny mpampiasa tsy maintsy hamaha ny fikirakirana ny fitaovana. Malahelo ny mpamokatra iray izay manao masinina mihidy sy distro Linux manokana ho an'io milina io aho, miaraka amin'ny kernel mety ho an'io milina io, miaraka amin'ireo mpamily manana alalana rehetra ao amin'io masinina io. Na ny FSF mihitsy no mankato ny fitaovana miaraka amin'ny linux. Niezaka nanangana solosaina Linux imbetsaka aho, ary tsy mbola nahazo solosaina manana fahazoan-dàlana Linux ... manomboka amin'ny sary, mitohy amin'ny chipset ... Ao amin'ny forum dia tofoka isika rehetra milaza fa miasa amin'ny zava-drehetra ny Linux , fa lainga avy eo. Miasa tsara ny Linux rehefa mikatona toy ny amin'ny decoder DTT misy kernel linux ohatra. Satria ny mpanamboatra dia namorona ny fitaovana sy rindrambaiko ho an'io milina io (heck like Apple). Saingy amin'ny tena fiainana miaraka amin'ny solosaina noho ny patanty ambonin'izany rehetra izany, ary ny tsy famoahan'izy ireo ny famaritana ambany dia tsy mandeha ny Linux, mila tifirinao izany. Ary tsy olan'ny GNU / Linux izany, fa ny hafa no mi-sabotage azy na tsy miara-miasa, araka ny tianao hilazana azy.
Amin'izao fotoana izao, tsy mahazo aina eo am-baravarankely aho, tsy mahazo aina amin'ny linux, ary tsy mahazo aina amin'ny OS X na iray aza amin'ireo asa telo tiako. Samy manana tombony sy fatiantoka avokoa izy telo. Ka tsy fanboy amin'ireo telo ireo aho. Na dia, tiako manokana amin'ny Linux sy ny filozofiany bebe kokoa aza ny toetrako manokana, fa tsy ny fiasany ary aleo tsy hiresaka momba ny famokarana.
Amin'ny Linux dia afaka manao ny zava-drehetra ianao, fa amin'ny tranga maro dia miadana kokoa noho ny amin'ny vahaolana hafa. Sary mahomby / Signage / Volavola iray miaraka amin'ny MAC / adobe 4000 euro ary mpamadika 3000 euro ary fakantsary 5000 euro no mamokatra amin'ny asany. Tsy mihantona ny masinina, OS X dia manaiky ny fakantsary sy ny mpamadika. Satria manana mpamily manokana izy io eo am-pikorohana ny bokin-tseky…. ary nandany 12000 euro ilay matihanina nefa mamokatra / mifaninana amin'ny asany. Ao amin'ny Linux, ny RAW an'ny fakan-tsary dia tsy manaiky azy ireo 100% satria efa navadika ho injeniera izy ireo, noho ny DCRAW mahafinaritra, saingy tsy mandeha tsara sy ny an'ny mpanamboatra izy ireo, satria i NIKON sy CANON dia tsy mamoaka ny andinindininy. Ary ny mpandrafitra 3000 euro dia tsy mandeha mihoatra ny 60% amin'ireo mpamily generika. Hadisoan'ny linux ve izany? tsia Fa izany no misy. Tiako ho hafa ve izany? ENY. Saingy tsy hisy izany, araka ny itiavako azy satria misy ny tombontsoa ara-barotra izay tsy izy. Raha mbola tsy novokarina ny fitaovana GNU dia tsy ho tratra mihitsy ny famokarana. Sa ve mandany vola 12000 euro ireo matihanina amin'ny fakana sary.
Linux dia utopia tsara tarehy, izay efa matotra amin'ny sehatra maro ary amin'ny sasany dia manoatra ny zava-drehetra, ohatra ny supercomputers. Ary ny computing ho an'ny computing. Ary manompo olona 90%, ary 100% ho an'ny fampiasana an-trano. Saingy tsy hahatratra ny rafitra hafa mihintsy izy io, raha tsy vita ny R&D amin'ny Linux dia tsy hitranga izany. Saingy ny R&D dia ataon'ireo orinasa te-hahazo ny vola vidiny mahasoa azy ireo amin'ny zavatra izay tsy hanome an'i GNU ny R&D.
Na manao ahoana na manao ahoana Linux aho, dia misy fotoana izay ahatsapanao azy. Izany dia manala kely ny fiheverako diso, saingy io no izy, ny tontolo kapitalista.
Eny, eny, nanazava ny fomba nilazanao hiteny an'io fitenenana io, azoko tsara ianao ... ho ohatra eto, mamaly avy amin'ny Windows aho satria voatery manao an'izany aho raha manao asa sasany izay tsy vitako ao amin'ny Linux.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny tsiriko dia Linux noho ny antony maro, saingy mbola miankina amin'ny W $ aho tsy nahita rindranasa mitovy na mihoatra ny Outlook, ireo izay zara raha misy 60%, ao amin'ireo mpitantana fampidinana dia tsy hitako mitovy. na ambony noho ny IDM na MiPony, ny JDownloader dia tsy aloky ny inona intsony, mavesatra be ary tsy mandeha araka ny tokony ho izy, KGet sy WGet manao izay ilaina, amin'ny celus tsy misy fanoloana Nokia Suite, Motoro, Samsung, ny Wammu dia totalin'ny voina ary miaraka amin'ny LibreOffice, izay iray izay mikoriana indrindra, tsy maintsy ataonao ny fanitsiana anao amin'ny $ M 2010 mba hijanonana ho mahatoky.
Ary amin'ny maha-vatosoa ahy dia hitako fa rehefa mampifandray amin'ny alàlan'ny Kubuntu aho ary mampiasa VirtualBox ary mampiditra ny pejy amin'ny alàlan'ny IE, dia miseho ireo sary masina IE sy W $ na dia Kubuntu aza ny rafitra fototra ary raha miditra amin'ny alàlan'ny PearLinux aho (toa izao) amin'ny Midori dia miseho izany. izay nampifandraisako tamin'ny alàlan'ny Midori tamin'ny alàlan'ny MAC ... hehehe ... 🙂
Ary iza no nanohitra azy ireo? Manoro hevitra an'i Mageia aho satria vonona ny zava-drehetra ary manana fikirakira mora be. Mila mianatra daholo isika, fa farafaharatsiny mba ahy, raha mila mampahafantatra olona amin'ny GNU / Linux aho dia apetrako amin'ny Mageia i Mageia.
Anti, ny valinteniko dia tsy ho anao, na dia niseho ambany noho ny anao aza izany, raha mijery akaiky ianao dia hafainganam-pandrefesana hafa noho ny anao io, tsy hoe ho an'ny na ho an'ny elav aza, izay novalinao, fa mankany RafaGCG
Angamba raha toa ka misy zavatra toa ny "valiny ..." nampidirina tao anaty hafatra, dia hisoroka ny fikorontanana izany.
Orale, marina ny anao. Hadisoako.
Ry mpiara-miasa RafaGCG. Ny fomba fisainako, fa ny hevitro manokana, dia ny GNU / Linux tsy tokony hahatratra filozofia toa an'i OSX, mainka ny Windows. Tiako ny toetrany ankehitriny, ary tsy azoko ny tianao holazaina amin'ny fianarana mandritra ny fiainana lol. Miankina amin'ny mpampiasa fotsiny izany. Raha tsy te hianatra ianao dia miforiza amin'ny fizarana mora ampiasaina, ary raha mila fanandramana fizarana "sarotra" ho an'ny mpampiasa mahazatra ianao. Marina fa toy ny meccano goavambe izay tsy maintsy ahodina ny sombin-javatra rehetra, saingy ny tena marina dia aleoko manome ahy "bolus" izay tsy azoko ovaina. Ary koa, ah, ny fahaizana mandrindra ny zava-drehetra. Na dia meccano aza izany ho an'izay maniry azy.
Ity ny hevitra manetriketrika mpampiasa / mpiara-miasa / geek an'ity fianakaviana lehibe ity. Ary tsy manome ahy fahatsapana fahatokisana izany, rindrambaiko manana.
Fiarahabana avy any Costa Rica.
Nilaza izany i Danny Glover 😛
Tokony ho resaka taona io (tiako holazaina ny fampiasana linux, mazava ho azy!), Efa nanao izany nandritra ny taona nitovizako ianao (Sarge no fizarako tara voalohany nandao ny windows) ary nanana fotoana tsy firaharahana tanteraka aho . Tsikaritro ny fiovan'ny fankasitrahako ny zavatra sasany, ohatra:
Ny distro-rolling, maninona no havaozina hatrany ny daty dia sarobidy? Ankoatr'izay, misalasala aho fa nanelingelina ny fanitsiana ny ankamaroan'ny bibikely izy ireo. Aleoko ny fitoniana.
Ireo birao, mankaiza? Eny, tsy raharahako izany, fa ny tsy miraharaha ahy dia ny fandaozana ny filozofia unix (modularity, tsotra, mazava, fanatsarana matanjaka, ...) taiza no nisy izay rehetra tao amin'ny KDE na tao amin'ny GNOME? Fitsipika efa lany andro, tsia Manana traikefa amin'ny vokatra paoma aho, saingy ny fahitako azy dia izy ireo dia mamolavola avy amin'ireo fitsipika ireo ary toa tsy dia manao ratsy loatra izy ireo.
Ny fahatsapako: 9 taona lasa izay dia io zavatra io ihany no noresahina, tao amin'ny forum hafa izay efa nanjavona, saingy mitovy ihany; Ka izao aho dia manana afomanga eo amin'ny efijery rehefa mifamadika birao, birao fandefasana semantic, tambajotra sosialy miorina, ary zavatra tsy misy farany izay tsy ampiasako matetika, ary toa any an-trano izy ireo no manome sakafo ny olona. Teo amin'ny toerana nisy antsika, raha ny fahitan'ny mpampiasa azy.
"Distro-Rolling, nahoana no ilaina foana ny fanavaozana ny daty?"
Mampiasa Debian ianao. Raha faritana dia saika tsy ho azonao ny mahazo azy.
"Aleoko ny fitoniana."
Ny teny filamatra mandritra ny androm-piainan'ny debianeros dia ny aleon'izy ireo miorina amin'ny zava-drehetra.
Ny REALITY lehibe dia ny androany _ stable daholo ny distro.
Na izany aza, satria manana olana ny debianeros amin'ny fanavaozana ny daty ary manome azy ireo vertigo hampiasa programa latsaky ny 1 taona, ary satria tsy nanandrana distros toy ny Arch na Gentoo mihitsy izy ireo, ary raha nanao izany izy ireo, dia azo inoana fa nanao izany tsy izy, dia ny mangidihidy, ny fitsarana an-tendrony ary ny tahotra atavista amin'ity karazana distro ity.
Ny nenina amin'ny debianeros Arch maro dia mafy toy ny vatolampy, haingana, malefaka ary maoderina, angamba ny ampahany noho ny filozofia KISS, mifanohitra amin'ny foto-kevitra Debian momba ny fizarana GNU / Linux, izay tsy azo atao fotsiny hametraka ny tanana rehetra tadiavin'izy ireo Ao anaty fonosana alainy avy any ambony, fa ambonin'izany dia manana torolàlana mifehy ny fomba hamehezana ireo fonosana rehetra alohan'ny hidirany ao amin'ny distro xD, izay tsy mahatonga vanila na inona na inona amin'ny Debian ary maharitra fotoana maharitra arivo taona hanamboarana olana izay tsy tokony hisy velively. Ratsy, tena ratsy Debian!
"Fa ny tsy miraika amiko dia ny fandaozana ny filozofia unix"
Havana izy io.
Unix dia hevitra mamirapiratra ary novonoina tamim-pahagagana. Saingy, androany 30 taona na mahery taorian'ny namoronana azy, hitantsika fa misy zavatra sasany azo atao amin'ny fomba mahomby kokoa, izay tsy ratsy koa.
Ny tombony lehibe ananantsika ankehitriny dia ny fananantsika ny traikefa teo aloha hahafahantsika manitatra ny Unix amin'ny faravodilanitra vaovao.
Raha tsy mandeha lavitra intsony, ny systemd dia iray amin'ireto teknolojia vaovao ireto, izay mahasosotra ny unixeros taloha dia mamaha olana maro izay nosedraina teo am-pikatrohana ny rafi-pitaterana (ny systemd dia PID 1) ary manokatra varavarana hahafahana manao zavatra mahafinaritra, amin'ny fanavaozana marina ny paradisa Unix.
Etsy ankilany, ny unixeros taloha dia hanana distros foana toa ny Slackware na ny rafitra miasa toa ny FreeBSD.
"Tsy manana traikefa amin'ny vokatra paoma aho, fa ny fahitako azy ireo dia mamolavola avy amin'ireo fitsipika ireo ary toa tsy dia manao ratsy loatra izy ireo."
Mifanindran-dàlana amin'izao fotoana izao dia misy ny fisalasalana eo amin'ny indostria momba an'i Apple satria manaiky ny ankamaroan'ny mpandalina fa lany hevitra izy ireo ary tsy mamoaka vokatra na teknolojia vaovao ao anatin'ny fotoana fohy - tsy fahombiazana izaitsizy ny iPad mini ary roa herinandro lasa izay ny anjaran'ny orinasa nanana ny fihenany voalohany voalohany tao anatin'ny fotoana lava.
Tsy fantatro ny fomba hiara-hiasan'izy ireo amin'i Darwin, ny metisy nomen'izy ireo aingam-panahy avy amin'ny FreeBSD, fa raha misy zavatra iray azo antoka dia satria Unix dia loza satria nandefa ny rahona rehetra tao amin'ny lohamilina HP AIX i Apple, raha nanao zavatra izy ireo marina araka ny nolazainao fa hanana ny mpizara azy manokana izy ireo ary tsy mila manilika ny fividianana vokatra amin'ny fifaninanana.
«Ny latabatra, ho aiza izy ireo? »
Azonao atao ny mandeha amin'ny tranokala tsirairay ary mijery ny fisehoan'ny mpamorona tsirairay, tsy sarotra izany 😉
«Ny fahitako azy: 9 taona lasa izay dia io zavatra io ihany no noresahina, tao amin'ny forum hafa izay efa nanjavona, fa raha ny tena izy dia iray ihany; Ka izao aho dia manana afomanga eo amin'ny efijery rehefa mifamadika birao, birao fandefasana semantic, tambajotra sosialy miorina, ary zavatra tsy misy farany izay tsy ampiasako matetika, ary toa any an-trano izy ireo no manome sakafo ny olona. Teo amin'ny toerana nisy antsika, raha ny fahitan'ny mpampiasa azy. »
Mazava ho azy fa io ihany no noresahina ary HITOHY IZAY MBOLA MBOLA HITADIAVANA satria tsy mitsaha-mivoatra ny rafitra ary koa ny filan'ny olona!
Raha ny tena izy, NY Dinika mitovy dia ireo izay ananan'i Microsoft, Apple ary orinasa fampandrosoana hafa ao anatiny momba ny vokatr'izy ireo ary tsy hitanao mihitsy! xDD Fantatro izay lazaiko satria izany no asako amin'ny orinasa fampandrosoana ny lozisialy sy ny fikirakirana hardware 😉
«Hamarino izy ireo eo amin'ny efijery rehefa manova ny latabako aho»
Nisy foana, tao amin'ny windows 3.1 dia nisy screensaver mahatalanjona iray natsipy tany amin'ny nosy iray, velomina tanteraka, ka nisy foana.
Fantatrao ve ny atao hoe biraon'ny semantika sy ny fahafaha-manolotra atolotray azy !!! ???
Azo antoka, satria ny Dolphin ankehitriny dia mitovy amin'ny an'ny File Manager taloha ho an'ny Win na Mac, eny.
«Ary zavatra maro tsy manam-petra izay tsy ampiasako matetika»
Mazava ho azy, TSY Mampiasa azy ireo ianao ary satria tsy ampiasainao azy ireo ny zavatra lojika indrindra dia ny hoe manjavona izy ireo, maninona no mampivoatra azy ireo izany raha tsy hampiasainao mihitsy izany!?
Tsy maintsy mijery any ankoatry ny foitra ianao ry zokiko.
"Saingy teo amin'izay nisy antsika izahay, raha ny fahitan'ny mpampiasa azy."
Ny farany no nanombohako, hoy ny te-ma-zo de La Renga:
Soa ihany isika fa lavitra ny taona 2003 (nandritra ny 9 taona nantsoinao): zavatra tsy mampino no nitranga teo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux ary ny fepetra hianjady amin'ny zava-misy dia ny Steam tonga eo amin'ny lampiharanay ... azonao ny haben'ny izany ary inona no maneho? Tadidinao ve izay GNU / Linux tamin'ny 2003? Izany dia kely noho ny sysadmins ary misaotra anao.
Nanao kaonty indray aho cuentas
+1 ho an'ny tsara ary +1 ho an'ny mandringa 😉
Ole! valiny mahasoa, mahay mandaha-teny ary mahatsikaiky.
Mandresy ahy amin'ny valiny lehibe toy izany ianao, Enga anie ny Tompontsika Stalzman hiaro ahy!
Mandalo amin'ny fihodinana aho, afaka mampiasa izay tianao ianao, indrindra fa ny Archlinux pass, fa tsy hoe satria tsy atokisako ny distro, izay tsy atokisako dia i Allan Mcrae, raha tsy mampiasa ny fizarana azy ho tontolo iainana hamokarana izy satria izaho ' handeha hampiasa azy aho. Etsy ankilany, ahoana no hamahana ny bibikely ao amin'ny archlinux? Mitady amin'ny fomba hafa? sa miandry ny fisehoan'ny recette? Satria tsy namaly an'izany ianao.
Tsy niova ny zava-drehetra hatramin'ny 2003 naseho tamin'ny valinteninao, ny tontolon'ny Linux dia mbola feno paranoida amin'ny mpiaro izay mitsambikina voalohany, ny fahalalana ny fomba hampirisihana azy ireo ihany.
Oviana aho no nilaza fa mampiasa debian? Nandingana kilasy famakiana ve ianao? Efa nilaza ny fizarana ampiasaiko ve aho? Very tadidy ve aho?
Tsia, tsy haiko hoe inona ilay biraon'ny semantika, ahoana izany? Raha mitady hazondamody aho dia hitan'ny kde ny paranoia -ko amin'ny fitendry ary mitady azy ireo ho ahy. STEP, aleoko mitsangana ary maka azy ireo ao amin'ny kabinetrako fanafody.
Mamaky làlana ve ny Systemd? Ary na iza na iza nilaza ny mifanohitra amin'izay, raha ny fanazavana, toa hitako fa KISS sy Systemd, ummmmmm, toa tsy miampy izy ireo, saingy tsy misy olana fa misy zavatra ao amin'ny rakibolana izay manamboatra ny zava-drehetra: antsoina hoe euphemism.
Ary tsy nilaza koa aho hoe tsy mamolavola izay tsy ampiasako izy ireo, nandingana kilasy famakiana ianao sa ahoana? (Manomboka mamerina ny tenako aho, noho ny fahanteran'ny taona). Fa avia, raha mitaraina momba ny windows aho satria mahatonga ahy hitondra mpilalao izay tsy hampiasaiko, rehefa hitranga amiko izany ao amin'ny Linux dia mitodika any aho mitsimoka, maso tsy mahita…. , fa raha tsy manao na inona na inona aho afa-tsy ny mangerokoroka, raha toa ka manana ny kde namboariko sy voangona miaraka amin'ilay safidy –no-sematic-desktop.
Mandray anjara amin'ny tsy fahombiazan'ny Apple aho, tsy mampiasa ny vokatr'izy ireo aho.
Mandray anjara amin'ny fandresen'ny linux aho, tsy mampiasa Archlinux.
Miarahaba ny tovolahy.
Tsikaritro fa hatramin'ny nampiasako ny GNU / Linux dia malefaka kokoa aho hifanaraka amin'ireo interface, ary nampiasa ny zava-drehetra aho, na dia ny "mode eagle", na zavatra toa izany. Io no ananan'ny fahalalahana, any izy dia mampilendalenda ny fananana safidy marobe, mety ho "tsy mahazo aina" kely izany, ho ahy tiako ny hampitomboana ny tetikasa, ny fisian'ny fanavaozana, hisy hatrany ny terminal hahatsapa ho ao an-trano (tsara kely).
Sombin-lahatsoratra, tiako izany ary tsy isalasalana fa tena marina ianao amin'ny zavatra rehetra asehonao, na dia amin'ny fiheveranao azy aza ..
Manantena aho fa ho tanteraka ny filokana ataoko. Raha tsy izany dia ho very tanteraka ny fahatokisako xD
Voalaza fa mbola ao amin'ny vanim-potoana Neolithic amin'ny internet isika. Azo antoka fa hisy fiovana mahakivy bebe kokoa. Vao tsy ela akory izay dia nahare momba ny faran'ny browser aho na dia toa ilaina aza izany ankehitriny. Ary voalaza ihany koa fa ny rindrambaiko dia ao aoriana lavitra amin'ny fifandraisan'ny mety amin'ireo fitaovana vaovao. Toa ny fahazarana ihany no hananantsika dia ny manova tsy tapaka.
Ny zavatra ratsy indrindra dia ny hoe tsy maharitra mandrakizay aho, tsy ho afaka hankafy fandrosoana ara-teknolojia ao anatin'ny 150 taona: '(
Mankasitraka ity lahatsoratra ity aho! Tena tsara izany, ary araka ny nolazain'i elav teo aloha dia omeko anao ny marina amin'ny zavatra rehetra eritreretinao. Nandao an'i Gnome manokana aho rehefa niditra tao amin'ny trano fitehirizan-trano 3.xx. Nifankatia tamin'i Gnome 2.32 aho ary mieritreritra fa tsy hitsahatra ny hitia azy io. Mate dia iray amin'ireo mpiara-dia amiko tsara indrindra ..
Raha niresaka momba ny XFCE aho dia nieritreritra fa mijanona ara-potoana ity birao ity. Androany aho nitady lohahevitra izay mampifangaro ny GTK3 mandritra ny ora maro, saingy tsy mitombina izany, na farafaharatsiny mba tsy hitako izay mifanaraka amin'ny antenaiko.
Angamba tsy misy dikany ny hevitro, angamba manome ny fiheverana fa tsy azoko (Izay mety ho azo atao), fa minoa ahy, azoko, ary mamporisika ahy hanandrana kanelina ..
Toy izany koa Thunar efa manana kiheba, Xfce hanana fanohanana Gtk3.. mila miandry kely fotsiny ianao, satria milatsaka eo ambanin'ny lanjan'izy ireo ny raharaha.
Mazava ho azy, ny faharetana dia kalitao lehibe amin'ny olona sasany.
Lahatsoratra mahafinaritra, nampiasa ny fanabeazana fototra aho hatramin'ny nananganana azy isan'andro nandritra ny 2 volana mahery izao ary mihamazava ny tianao holazaina miaraka amin'ny firindrany miaraka aminy, fahafinaretana lehibe ho ahy. Miarahaba
mcder3 dia hoy izy:
Raha mandeha any amin'ny CSS ny plasma dia heveriko fa loza izany raha ny fahitako azy ... tsy hisy ny fanamboarana ary ny lohahevitra dia hitovy amin'ny fomba maro.
Mamaly an'i mcder3
Hevitra iray io. Ho ahy dia mora kokoa (ary efa misy lohahevitra mitovy amin'izany) ny manaingo ny CSS ary Qt dia efa manohana azy, misaotra an'i QSS. Tsy misy zavatra hafa ampiharin'ny KDE. Ny vinavinako aloha.
Amin'ny lafiny iray dia marina ianao, misy ny fitoviana mitombina nefa amin'ny farany ny lohahevitra sasany dia miavaka amin'ny hafa. fa ho ahy dia heveriko fa mora kokoa ny manohy miasa miaraka amin'ireo rakitra vector izay voalamina noho ny amin'ny fisie CSS (heveriko fa resaka tsirony XD)
Ny zava-mitranga amin'ny KDE dia lasa sarotra be (farafaharatsiny amiko) ny manova lohahevitra na mamorona lohahevitra iray.
Ary koa ny fanaovana lohahevitra amin'ny CSS ... tadidio fa tsy isika rehetra fandaharana XD
Mba hamoronana lohahevitra iray dia tsy maintsy averinao ny injeniera Air ary avy eo dia lasa mora takarina ny zava-drehetra (amin'ny fitsidihana ity torolàlana ity ihany koa: http://techbase.kde.org/Development/Tutorials/Plasma/ThemeDetails)
Ny fanaovana izany amin'ny CSS dia mety hidika ho fisie iray (tsara, tsy fantatro ny fomba hampiharan'izy ireo azy; fa ao amin'ny GNOME sy kanelina dia CSS tokana sy sary vitsivitsy fotsiny) ary tsy fandaharana tena izy. Izy io dia mamaritra, na zavatra mitovy amin'izany; ahoana ny fahitana ny toe-javatra.
Fantatrao, mieritreritra aho fa ao amin'ny sampana fampandrosoana KDE manaraka (5) dia heveriko fa hitondra tsy ampoizina ary ho tsara kokoa. Tsy fantatro izay ho toetran'izy ireo fa ny fahitana ny fanatsarana faran'izay KOffice ary ny fahaizany mandanjalanja dia hahatonga azy io ho tsara kokoa noho ny taloha. Maneho hevitra momba io voalaza etsy ambony io aho noho ireo fanandramana vao niseho (BE: Shell sy Hommer) ary koa ny kinova takelaka omeny antsika manome hevitra fa mety mikasa ny handamina ny ekipa fampandrosoana sy kalitao.
Eny, maro be ireo fanovana ary tena tsara, saingy tsy tokony hanantena hahita zavatra mahery vaika isika amin'ny lafiny interface. Mazava ny tovolahy ao amin'ny KDE fa ny ilain'ny Desktop-nao dia ny fanatsarana sy ny fanitsiana ny lesoka, noho izany indrindra ny fanatsarana dia manodidina izany. Azo antoka fa hisy zava-baovao hanampy (na dia amin'ny andiany 4.10) ..
Antenaina fa indray andro any izao tontolon'ny tontolo iainana maivana izao dia hahatratra io olana io ihany…. Ho antsika izay mampiasa LXDE na tontolo maivana kokoa dia hita ny fiovana fa miadana kokoa.
Raha miresaka momba ny fanavaozana dia misy tetikasa vaovao nahasarika ny saiko .. tontolo birao vaovao izay mandeha amin'ny wayland ary antsoina hoe Hawaii.
Heveriko fa ny olana dia ny fanirian'izy ireo havaozina haingana loatra. Ny GNOME, ohatra, dia nanao fanovana ... tampoka loatra. Tokony ho namorona zavatra mitovy amin'ny MGSE avy amin'ny rangotra izy ireo, ka tsy fifanakalozana puce iray manontolo. Mbola tiako ny GNOME Shell, ary tsy hitako izay maharatsy ny GTK3.
Ny firaisankina dia tantara iray hafa ... Tiako lalina izany. Mazava ho azy, ny olanao dia ny fitoniana sy ny zavatra ... Rehefa mampiasa GNOME Shell dia tsy tiako ny mampiasa beta, ao amin'ny Unity no ataoko. Izany no mahatonga an'i Ubuntu tsy nanavao azy io ho 12.10.
Toa tsy mpandala ny nentin-drazana mihitsy ny XFCE amiko, mitohy hatrany amin'ny andalana faran'izay kely indrindra nefa raha tsy "manapaka" be loatra ireo zavatra "tsara tarehy" (raha ny fahitako azy dia mihenjana kokoa ny LXDE). Raha nitranga tamin'ny GTK3 izany dia faly aho, tsy hitako izay tsy mety. xD
Ary mahita ho avy be ho an'ny Kanelina aho, mieritreritra aho fa ny bandy Mint dia manao asa tena tsara, ary avy amin'ilay kely nanandramako ny kinova 1.6, dia milamina tokoa izy io.
Ka hanohy hampiasa Ubuntu miaraka amin'ny Unity sy GNOME Shell amin'ny lafiny iray aho, Xubuntu (izay hodorako izao) etsy ankilany, ary angamba, amin'ilay fizarazarana sisa tavela (avy amin'izay kasaiko esorina Arch satria tena tsy tiako izany) hapetrako i Mint, Fedora (fanindroany fanintelony) na zavatra miaraka amin'ny KDE.
Tsara ilay lahatsoratra, tsy mifanaraka amin'ny zavatra 1 fotsiny aho, misalasala aho fa hibodo ny toerana voalohany eo amin'ny tontolon'ny birao indray i Gnome, heveriko fa ny fomba tokana hahatratrarako an'io dia noho ny fisian'ireo fizarana malaza indrindra manery azy shoehorn toy ny mahazatra dia nitranga izany, fa araka ny hitantsika tato ho ato, dia mitodika any aminy ny ankamaroany na farafaharatsiny manalavitra azy ireo tsikelikely (Ubuntu, LM, sns). Tsy fantatro ny antony ahitako fampitoviana amin'i Gnome amin'ilay toe-javatra iainan'ny W8 XD.
Tsy misy isalasalana fa ny KDE no ho mpanjaka, saingy mbola be ny manatsara hatrany, tsy amin'ny asany na amin'ny toetrany, tsy maintsy miasa mifototra amin'ny zava-misy izy io mba hanesorana ny stigma nomen'ny maro azy, ilay ratra taloha izay mbola tsy sitrana antsoina hoe Qt.
Izao, ity ny pisiniko:
Ny firaisankina dia hilalao ny laharana faha-2 ho tontolo iainana be mpampiasa indrindra amin'i Pantheon, mety tsy ho hitantsika izany amin'ny ho avy, fa hitranga izany. Ny kanelina dia tsy hitsahatra amin'ny fanandramana ekipa LM, zavatra iray izay lasa mahazatra.
Mate dia hijanona ho safidy ho an'ny mpampiasa nostalgika rehetra.
XFCE dia manana ho avy tsy azo antoka, noho izany dia hiafara amin'ny zavatra tsara izay tsy afaka hiaraka, mety tsy hanjavona izy io, saingy azo inoana fa hiafara amin'ny alàlan'ny tontolo iainana hafa (mino tanteraka aho fa izany no tena antony Debian ve tsy vitako ny nandresy lahatra ny tenako rehefa nanandrana nandray azy io).
Ny tsy fantatra lehibe amin'ity lalao ity dia E17, tontolon'ny birao izay, raha tohanana tsara, dia manana vintana tsara kokoa noho ny XFCE sy Gnome atambatra. Fa toy ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux, ny fizahan-tavan'olona (tsy lazaina hoe fanboyism) no manapaka, manjaka noho ny voninahitra izay mendrika ny homem-boninahitra.
Hehehe, izaho manokana dia tsy mahita ho avy ho an'ny Unity, Kanelina, ary angamba Mate.
Faminaniako izany. Azo inoana fa tsy hahomby.
Ny tsy fantatra lehibe amin'ity lalao ity dia E17, tontolon'ny birao izay, raha tohanana tsara, dia manana vintana tsara kokoa noho ny XFCE sy Gnome atambatra. Saingy toy ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux, ny fizahan-tavan'olona (tsy lazaina hoe fanboyism) dia voafehy, manjaka voninahitra izay mendrika omena voninahitra.
Heveriko fa tsy dia misy dikany ambany toy izany ny kanelina, na mieritreritra aho fa ny E17 dia hahazo laza bebe kokoa (na dia tianao aza izany): P.
XD, mazava ho azy fa tiako E17 ary raha tiako izany dia noho ny tena mety ananany (misalasala be aho fa manarona tanteraka ny toetrany sy ny kilemany ny filaharako), iza no afaka manarona ny masoandro amin'ny rantsan-tànana? Izay no antony nilazako fa raha omena ny fotoana mety hanjary zava-dehibe io, zavatra saika tsy azo tanterahina ao amin'ny GNU / Linux, raha ny fizahan-tavan'olona dia mifantoka hatrany amin'ny fomba fanao mitovy amin'ny fivavahana antokom-pinoana ¬ ¬.
Manana porofon'izany izahay ao amin'ny KDE, satria izy no tontolo feno sy milamina indrindra, ny 3 amin'ireo fizarana malaza indrindra 10 no mampiasa azy ho fenitra (openSUSE, Mageia ary PCLinuxOS).
Inona ny 6 ambiny? (Tsy asiako Arch ny antony mazava loatra):
Mampiasa Gnome daholo. Ka ny fanontaniako dia: Aiza ny fiaraha-mientana rehefa lazain'izy ireo fa loza i Gnome, fa mpanimba fahefana ny mpanorina azy sns ...? Ka inona no azontsika antenaina amin'ny E17? Amin'ity panorama ity, tsy misy ...
Angamba ny pitsopitsony dia ny taloha, noho ny fahamoran'ny fikirakirany sy ny hafa, ny Gnome dia nampiasaina kokoa noho ny KDE (na dia eo amin'ny sehatry ny fandraharahana aza), miaraka amin'ny fiovana avy amin'ny Qt4 dia maro ireo olona nandeha (ampidiriko ny tenako) ho an'i Gnome ary tena nahafaly azy ...
Miombon-kevitra amin'i elav aho. ny gnome dia nampiasaina kokoa noho ny kde ary mora hamboarina.
Toa tsanganana nosoratan'i John C. Dvorak ity. Miarahaba anao.
Noho ireo faminaniana diso?
Tena noho ny maha-mampiady hevitra an'i John. Raha omenao Magazine PC aho, dia mankany amin'ny tsangambaton'i Dvorak aho, tsy noho ny faminaniany fa noho ny heviny mampiady hevitra "rights liberal / tech conservative" Io conservatisme amin'ny teknolojia io (miampy an'i John mankahala an'i Apple) no mahatonga ny faminaniany diso matetika.
Miarahaba ny mpanoratra an'ity lahatsoratra ity. Manana prosa izay tena mampieritreritra anao izy. Raha ny marina dia tiako ny zavatra ankehitriny. Heveriko fa tsara kokoa ny manana "tsipika" maromaro hisafidianana toy izay manaraka andalana iray raha toa ka misy tsy fahombiazana ... araka ny lazaintsika eto, dia nifoka izy ireo, toy ny amin'ny Windows Vista. Raha tsy mahomby ny tontolo iainana, raha tsy mifanaraka amin'ny filantsika izany dia tiako ny manana safidy maromaro, izany fahalalahana hisafidy izany dia zavatra iray izay tsy hovako mihitsy ho an'ny tsipika fampandrosoana iray misy. Afa-tsy mazava ho azy, ny fanaparitahana be loatra an'ny GNU / Linux. Ohatra, miresaka momba ny fizarana, ny karazany dia tsara, araka ny nolazaiko tao amin'ny bilaogy hafa, ny Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Debian, Arch, RHEL, SUSE ary ireo lehibe hafa, fa tsy satana Ubuntu, Christian Ubuntu, Justin Bieber Linux, na zavatra Noho izany.
Heveriko fa mandeha amin'ny làlana tsara i KDE. Voalohany, ny fampivelarana ny interface ho an'ny mpampiasa biraonao sy ny laptop, fa ny fampivelarana ny interface ho an'ny finday amin'ny làlan-kafa. Tsara kokoa raha nanao toy izany i Gnome.
Ahoana ny Anti.
Fantatrao, miombon-kevitra tanteraka aminao aho satria ny zavatra natsanganao teto amin'ity habaka ity dia zavatra notohizako hatry ny ela ary tamin'ny fotoana hafa dia naneho hevitra momba izany koa aho teto. Raha hitranga izany na tsia dia tsy azo atao ny mahafantatra satria tsy oracle hahafantatra ny ho avy ianao. Inona no zava-misy ary raha hitako dia ny fironana hampiraisana. Ohatra iray mazava ny Gnome ary tsy zava-poana fa misy fanandramana mamela, ohatra, ny KDE haka tahaka ny firaisankina na koa tontolo hafa (be: shell). Ny fambara iray izay afaka manampy dia ny fiarahan'ny tafondro miasa miaraka amin'i google hanana tontolo iainana sariaka arak'ireo rafitra resahina. Famantarana iray hafa azo dinihina dia ny fitoviana lehibe eo amin'ny Android, webOS ary akorandriaka.
Ny etsy ambony dia tsy hiarovana ny gnome, milaza fotsiny aho fa efa vita ny dingana ary eo am-panaovana azy ny asa, tsy ho an'ny zava-misy tsotra fotsiny amin'ny fanavaozana fa satria ny ekosistema mihidy toy ny paoma ary ankehitriny microsoft dia manara-penitra ny tontolo iainany fa ny fiankinan-doha amin'ny fianarana dia kely dia kely ary azo atao tsara ny miditra; midika izany fa tsy azo avela i Linux. Cannonical sy Google, ohatra, dia orinasa manao raharaham-barotra hahazoana vola ary mazava ho azy fa tsy ho diso anjara amin'ny fikolokoloana ny mofomamy izy ireo.
Ny fiakaran'ny fitaovana finday toy ny takelaka sy finday smartphone na finday avo lenta dia manery ny solosaina hivezivezy kokoa, izany dia midika fa manala izay tsy ilaina ary mamela ny fototra fotsiny. Ohatra, maro no nitaraina momba ny nautilus 3.6.x ary tena tsy hitako ny antony, satria ny endrika ihany no niova kely fa tsy ny lasa; raha manampy ihany koa isika fa afaka manamboatra fanitsiana sasany dia afaka manana zavatra vitsivitsy izay tsy misy mazava tsara, toy ny menio manodidina.
Ity voalaza etsy ambony ity dia fifanoheran-kevitra eo amin'ny tontolon'ny GNU / Linux satria ny fananana hatrany dia ny fahafaha-mianatra sy manolotra fahasamihafana, noho izany raha ny fijeriko azy dia tsy mitombina ny manakaiky ny mivoatra sy mahazo fahalalana vaovao.
Efa manana traikefa an-taonany vitsivitsy aho tsy amin'ny linux ihany fa amin'ny sehatry ny informatika koa tsy mihevitra ny tenako ho improviser. Heveriko sy averiko fa mazava ny famakafakananao ary tsy dia diso loatra ny vina arosonao, ary zaraiko ihany koa.
Ho fanovozan-kevitra: nampiasa linux aho ho birao voafaritra nanomboka ny taona 1999 ary ny distro voalohany nataoko dia slackware 4 niaraka tamin'ny KDE ho birao (ilay mpandala ny nentin-drazana, nentim-paharazana ary iray amin'ireo tranainy indrindra), amin'izao fotoana izao dia mampiasa Arch miaraka amin'ny GNOME Shell ho zanako birao. Nampiasako ny DE (KDE, Gnome, XFCE, LXDE, E17 ary Razor-QT) rehetra ary koa ny WM (openbox, dwm, fluxbox, sns).
Tiako ilay lahatsoratra, tena mahatsapa ary antenaina fa noho ny SL dia mitranga izany rehetra izany. Manaiky ihany koa aho amin'ireo hevitra fa tsy misy ny ho avy ny firaisan-kina raha tsy mieritreritra zavatra maromaro izany, ary amin'ny fototra dia ekeko tanteraka izany, raha ny marina dia ilay nampiasako azy io ary bibidia…. Zavatra iray ihany satria miankina amin'ny repos Ubuntu, tsy maintsy mieritreritra ny hiova amin'ny renin'ny reny aho (Debian) satria tsy izao fa amin'ny habetsaky ny fametrahana famakiam-boky ianao ary mangataka anao hametraka ny solomaso firaisan-tsaina ary na ny firaisana aza. …. Lahatsoratra tena tsara tokoa
"Linux dia utopia tsara tarehy ..." hoy Rafa GCG ankoatry ny antony hafa. Mitondra lanja be ny teny ao amin'ny lahatsoratrao. Hilaza aho fa, angamba, somary resy, na pessimistic, fa tsy afa-maina amin'ny zava-misy, na dia tsy eo ivelan'ny fahitana somary futuristic aza izy ireo, satria miresaka amin'ny fotoana lavitra sy eo amin'ny tontolon'ny solosaina dia tsy fantatsika izay hitranga ao anatin'ny roa andro. Mazava ho azy fa Linux dia utopia tsara tarehy. Fa fantatry ny rehetra fa ny "miaina" tenany dia efa ampahany amin'ny utopia. Ny Universe iray manontolo dia ampahany amin'ny utopia. Linux dia utopia ary utopia tsara tarehy. Ny fanamby lehibe dia manomboka hatrany amin'ny utopia.
fVckingmania.hell dia hoy izy:
Inona no nolazain'ny rehetra, POST mahatalanjona !!! Miombon-kevitra amin'ny ankamaroan'ny "vinavinako" ianao ary tena somary nesorina tamin'ny tontolon'ny Free Software sy ny vaovao amin'ny ankapobeny aho ankehitriny dia navelanao tamiko ny faniriana hanomboka hianatra.
@RafaGCG: Namana, indrisy fa tsy maintsy manome zavatra foana isika, manampy antsika ao am-paosy ny GNU / Linux saingy manery ny atidohantsika izany ary Microsoft sy Apple manampy antsika ao amin'ny ati-doha nefa manery ny paosintsika 😀 😀 😀, fa raha mila miteny aho fa izaho dia tena Araka ny filazanao, amin'ny farany dia hiafara amin'ny fizarana (na iza na iza) ho an'ny ankizy ao amin'ny faritry ny ankizy, mba tsy hamonoana be na handoro neurons bebe kokoa LOL
Valio amin'i fVckingmania.hell
Nhaa, raha mbola manana terminal aho dia salama 😀
Manaiky aho. Raha mijery an'i Gnome ianao dia efa nanomboka ny làlana…. Ary izany dia mety hahatonga anao any amin'ny "latabatra amin'ny ho avy" haingana kokoa amin'ny fomba milamina sy mahafinaritra, tsy misy ratra.
Ny pisiniko (sy ny faniriako):
Amin'ny fotoana ahatratraran'i Gnome ny tanjon'ny Gnome OS dia heveriko fa tsy hiteraka fisalasalana intsony izany ary hofaranana ny fomba maoderina sy ny fampiharana izay efa natomboka.
Mbola ho eo i KDE…. fa ny zavatra mitovy amin'ny MacOS na iOS dia mila miolakolaka.
Ireo tolo-kevitra rehetra ireo (Kanelina, Mate, sns) dia hijanona ho safidy vitsy an'isa, miaraka amin'ny XFCE.
Ary farany, ireo mandeha samirery, izany hoe, Unity…. Na hiova be izy io na handoa azy ireo amin'ny farany.
Andriamatoa j dia hoy izy:
Ry tompokolahy, handresy ny tontolo iainana izay, ankoatry ny be mpampiasa indrindra, no manintona indrindra. Hadino fa ny OS dia fototry ny fampiharana fotsiny, ny mpampiasa (tsy miresaka momba ny tontolon'ny asa aman-draharaha, izay misy lanjany bebe kokoa) dia hisafidy an'io rafitra io izay ahitany fa mahazo aina sy mahita azy manintona kokoa izy, ahoana ny amin'ity windows 8 vaovao ity…. Miaraka amin'ny mpanoratra aho, GNOME dia ho mpanjaka, raha tsy hoe manana ace ambony tanana i KDE.
Valiny tamin'i Andriamatoa J
miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia mihetsika isika mba hanala ireo fampiasa
Ny fahombiazan'ny Desktop dia miankina amin'ny mpampiasa mampiasa azy. Andao horaisintsika ho ohatra i ElementaryOS, tena tsara, voakarakara tsara, vokany mangatsiaka, fa firy ny mpampiasa manompo an'izany? Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny zavatra rehetra dia minimalist tokoa, saika tsy misy safidy dia tsy zavatra tian'ny rehetra.
Hisy hatrany ireo mpampiasa te-hampanjifa ny Desktop-dry zareo, manana safidy saika ny zava-drehetra, ary na Pantheon, na GNOME, na Unity, na Xfce dia samy tsy manana izany na manao azy toa ny KDE.
Farafaharatsiny mahatsiaro tsy mahazo aina aho raha tsy misy ny safidin'ny Dolphin, KATE, sns ... Fa mazava ho azy, izaho izany. Mahafinaritra ny ElementaryOS araka ny nolazaiko teo aloha, saingy rehefa avy nampiasaiko nandritra ny 20 minitra dia tena te handositra aho satria tsy nahafa-po ahy mihitsy ny fampiharana azy.
Manohy manavao ny GNOME, saingy ny zava-drehetra dia toy ny fanandramana. Rahoviana izy io no tena hanana kinova milamina sy mahomby? Amin'ny fotoana hitrangan'izany, ny KDE (izay namaritra ny tanjon'ny fanatsarany) dia efa nisambotra mpampiasa maro hafa. Andininy hafa, azoko atao ny mampiasa ny KDE amin'ny PC, ny Netbook na ny takelaka, na dia amin'ny Windows aza ... Azoko atao ve izany amin'ny Gnome? Manana ekipa QA ve i Gnome?
Ireto ny sasany amin'ireo antsipiriany milaza amiko fa ho an'ny interface vaovao be dia be dia tsy hipetraka ao amin'ny tampon'ny toerana taloha intsony io.
Bro, ataoko faharoa ve ianao sa ajanona eo izy XD?
Taratra tsara ary minoa ahy fa zaraiko manontolo 😀
Tiako be izany ary heveriko fa marina ny fahitana ny tetikasa GNOME amin'ny resaka fivoarana vaovao ... na dia lojika tsy misy safidy sy endri-javatra marobe aza izy io, hitako ho safidy tsara ho an'ny takelaka, tsara lavitra noho ny Android, izay kernel misy frankenstein miaraka amina milina virtoaly Java mandeha eo amboniny.
Ny distro mailaka, maivana ary malefaka toa an'i ArchARM miaraka amin'ny GNOME / Shell na mitovy amin'ny takelaka dia safidy manintona indrindra, indrindra satria tsy toy ny Plasma Active izay manenjika ny foto-kevitra "gadget" amin'ny fomba hafa fa manana distro feno aho amin'ny kely mikasika fitaovana miaraka amina interface tsara natao ho an'ity tanjona ity!
Ny hitako ao amin'ny KDE dia tena azo namboarina izy io, saingy tsy tsotra izany, ary tsy mifanaraka amin'ny zavatra marobe izany.
Etsy ankilany, ny gnome dia misy zavatra marobe ho toy ny mahazatra, fa ny fametrahana extensions dia tena mora sy haingana
izay ny resaka lohahevitra, vao haingana aho no niditra an-tsehatra tamin'ny KDE (indray), ary toy ny teo aloha, nahatsapa ho tototry ny aina sy tsy mahazo aina aho amin'ireo safidy maro izay hitako fa tsy misy ilana azy fotsiny, amin'ny andavanandroko dia tsy mampiasa sary masina eo amin'ny birao, tsy mampiasa widgets, Tsy mampiasa motera aho hanondroana atiny sns .... Ny zavatra iray hafa izay tsy tiako momba ny KDE dia ny fomba tsy DE fotsiny fa SC ihany koa, fa "na eny na eny" tsy maintsy apetrakao ny programa KDE, satria toa ratsy ny fisoratana anarana gtk nefa tsy mihodinkodina. . fa zavatra izay raha tsy maintsy deraiko ny KDE dia ny estetika. 😀
raha ny hevitro, xfce dia tokony efa nanao ny hitsambikina ho gtk3, fa hey, izao hiandry herintaona. XFCE dia birao marobe maivana sy maivana ankehitriny, manana ny ampy fotsiny izy io ary tena miasa izy io, saingy ny hevitro manokana, io no ampiasaiko eo amin'ny birao.
zavatra tsy dia miteraka afo ao amin'ny kaomisiona rindrambaiko maimaimpoana dia ny fikorontanan'ny WM (raha ny fahalalako azy), dia niova avy eo amin'ny openbox ho Aw Aw WM aho amin'ny solosaina findaiko, ary tsy maintsy milaza aho fa nahasarika ahy io, mamokatra be izy io, tsara tarehy ary miasa, maivana ary mahafinaritra be ny mampifanaraka azy amin'ny an'ny rc.lua anao 😀 hahahaha mihoatra izany, manomana fampianarana aho hametraka an'ity wm ity sy ireo widgets tena mahaliana. Arch + mahatalanjona dia mahagaga ny mitomany hahahaha
momba an'i Gnome, satria nanandrana kely aho, mavesatra izany, tsy azo ovaina loatra, tsapako fa nihemotra izy io.
"Amin'ireo safidy maro be izay hitako fa tsy nisy nilana azy tsotra izao, tamin'ny fiainako andavan'andro"
Ny tsy fampiasanao azy ireo dia tsy midika hoe tsy misy ilana azy ireo, tsy mampiasa digiKam aho fa fantatro ny mpaka sary sasany izay tsy manova an'izao tontolo izao 😉
"Tsy mampiasa motera aho hanondro atiny,"
Indraindray tsy dia be loatra ny fanondroana anarana, indrindra rehefa miasa miaraka amina rakitra marobe ianao ary indrindra ny kinova maro amin'izy ireo, dia misy fotoana iray izay zavatra saika tsy mahazatra intsony ilay anarana, dia ampiasainao fotsiny amin'ny fisoratana anarana izany satria nifindra niaraka tamin'ny «Vao novaina", "novaina tamin'ny ora farany", sns. ny tsirairay avy kosa dia baikoina vondrona, karazana rakitra ... tsara, na inona na inona tianao.
Tsy very maina i Apple nampihatra an'ity paradigma ity nandritra ny taona maro hatramin'ny nanamboarana ny masininy tamin'ny besinimaro momba ny sary matihanina izay mahazatra ny manana kinova 20 mitovy amin'ny rakitra mitovy aminy, izay samy misy fanitsiana kely, hevitra vaovao, sns.
Mandany ny 70% amin'ny fotoanako any amin'ny terminal aho fa rehefa miasa tsara amin'ny kopia mitovy amin'ireo rakitra ireo dia fitahiana ny indexing:
«Ny zavatra iray hafa tsy tiako momba ny KDE dia ny fomba tsy DE fotsiny fa SC koa," o eny o raha "tsy maintsy apetrakao ny programa KDE"
... ary gaga aho fa amin'ny maha mpandefa zana-tsipìka anao dia milaza ianao fa rehefa fantatrao tsara fa afaka misafidy ny hametraka ny suite feno ianao ary ireo fampiharana fanampiny izay tsy ao anatin'ny fanangonana ofisialy na, raha tsy mahomby izany dia ny fampiharana tadiavinao ihany .
Ny sisa apetraka dia ny rafitra fototra satria ny KDE SC dia natao ho "compilation software" fa tsy tontolon'ny birao fotsiny.
Ny maharatsy an'io fomba io dia raha tsy te hampiasa rindranasa iray na roa fotsiny ianao dia mila mampidina rosiana fanampiny be dia be koa, ny tombony dia mora kokoa ho an'ny olona ny mamorona rindranasa feno tohana ho an'ny KDE satria izy io manome tranomboky goavam-be sy API be dia be hifandraisany amin'ilay rafitra, hany ka tsy manahy afa-tsy ny handrafitra ny rindranasao ianao fa tsy amin'ny fampidirana azy amin'ny tontolo iainana.
"Eny, ny fampiharana gtk dia toa ratsy nefa tsy mihodinkodina ... .. fa ny zavatra tokony hiderako ny momba ny KDE dia ny hatsarany."
Azo antoka fa ratsy ny endrik'izy ireo amin'ny fomba fisehoan'ny ratsy amin'ny fampiharana KDE SC ao amin'ny GNOME! Ny tiako holazaina dia… wtf !!
Mieritreritra aho fa diso be ianao amin'ity resaka ity miss! xD
Zahao hoe manao ahoana ireo fampiharana Gtk + rehetra ireo:
"Raha ny hevitro, ny xfce dia tokony efa nanao ny fitsambikinana ho gtk3,"
Raha tsy diso aho, dia tao amin'ny lahatsoratra vao tsy ela tao amin'ity bilaogy ity ihany no nanoratan'ny iray tamin'ireo mpankafy Xfce marina momba an'io lohahevitra io ary nampifandray ny url an'ny premiere iray izay ataon'izy ireo amin'ny dev lehibe amin'ny lohahevitra izay manisa azy - raha tsy mahatadidy ahy izany - dia mbola tsy afaka nifindra monina tanteraka tany amin'ny Gtk3 izy ireo noho ny tsy fitovian'ny kaody sasany, saingy niara-niasa tamin'ny GNOME ry zareo mba hamahana ny olana.
«Niova avy amin'ny boaty misokatra ho Awesome WM amin'ny solosaina findaiko aho, ary tsy maintsy milaza aho fa nahasarika ahy izy io, mamokatra be izy io, tsara tarehy ary mahomby, maivana ary mahafinaritra tokoa ny manamboatra azy amin'ny an'ny rc.lua hahahaha, izaho eo am-panomanana tutorial hametrahana an'ity wm ity sy widgets tena mahaliana maromaro aho. Arch + mahatalanjona dia mahagaga ny mitomany hahahaha »
Eny ary !!
Nampiasako WM be dia be tamin'izany fotoana izany ary amin'ny farany dia miverina ao amin'ny AwesomeWM foana aho, tiako ny dwm noho izaho minimalist bebe kokoa saingy tsy manam-potoana ahafahako manamboatra azy.
Manantena aho fa rehefa manantona ilay mpitari-dalana ianao dia mametraka configurations maromaro mba hananana bara fampahalalana mitam-piadiana miaraka amin'ny enta-mavesatry ny tamba-jotra, ny cpus, ny angona fifandraisana, sns! ;-D
Miarahaba ary manantena hahita ny lahatsoratra ato ho ato!
milamina fa saika nokapohinao aho ¬¬ hahaha
Izay no antony nilazako hoe hevitro manokana sy subyektiva io, tsy mitovy amin'ny zava-misy any an-kafa izany hahaha.
Marina ny hevitrao, satria marina ny ahy, momba ny SC, sarotra tamiko ny nifidy ny meta-fonosana na ny safidy hafa (afa-nandositra ahy ny anarana) minoa ahy fa nomeko vintana ny KDE fa izaho kosa nidina toy ny 600 mb, (Tsy manohitra ny KDE aho, tsy dia ataoko akory izay)
eny tokoa, be latabatra ny latabatrao !!!! xD Tiako io lohahevitra io 😀 ary tsara be ny fampiharana!. Esoriko izay voalaza momba ny GTK.
Tsy haiko ny famakianao ny saiko, ireo widget amin'ny enta-mavesatra rehetra, ny enta-mavesatra CPU, ny habaka HD, ny fahatsiarovana ram. tsy ho diso fanantenana ianao; D
PS: Nanomboka nihomehy tamin'ny horonantsary ratsy fitondran-tena sy adala aho hahahahahahahahahahaha
«Ary adaladala ianao !!!», macanudo ny kisoa eh! Nosintomiko izany satria tadidiko fa nahita azy tamin'ny fahitalavitra, taloha be.
«Milamina fa saika nokapohinao aho» Ooops tsy fikasako izany, indraindray somary sosotra aho, mieritreritra aho fa noho ny 0Rh-, farafaharatsiny mba toy izany ny lafiny ao amin'ny fianakaviana ;-D
“Ireo widgets enta-mavesatra rehetra, cpu entana HD toerana, fitadidiana ram. Tsy ho diso fanantenana ianao, D »YUM !!! Mahagaga, ho lasa mpampianatra Lua / Mahatalanjona WM vaovao aho amin'izay!
Eny, manana izany fahazarana izany izy ... entin'ny fihetsem-po ary saika miafara amin'ny ompa na fanafihana olona ... msx tsy maintsy hisarika ny sainao indray ve aho? 😀
Raiso ho toy ny sakaizan'ny mpianakavy ny tsirairay eto, samy manana ny fomba fijeriny ny tsirairay, na dia mety hitovy amin'ny anao io na tsia ... tsy maninona, tsy maintsy hajaina 😉
Tsia Kazita, tsy hanaratsy olona na hanafika olona mihitsy aho noho ny fetran'izy ireo !! >: D
Fahaleovantena, fahalalana fotsiny (indraindray mety diso aho, mazava ho azy) ary testosterone, tsy resaka mitsambikina toy ny dragonfly amin'ny alàlan'ny ahitra ny tananao ao anaty sobika wicker ary mizara voninkazo amin'ny sisiny 😉
Haha, juuuusto sendra an'ity lahatsoratra ity aho, avelako ho anao hahatratra an'i Apple>: D
[kaody] Olana goavambe an'i Apple: Mihatsara kokoa ny Google amin'ny famolavolana haingana kokoa noho Apple mihatsara ao amin'ny Internet [/ code]
Ny fanamarihana dia avy amin'ny Business Insider ka ny fahatokisan-tena sasany dia manana 😀
Tsia Kazita, tsy hanaratsy olona na hanafika olona mihitsy aho noho ny fetran'izy ireo !! >: D?
Miombon-kevitra amin'ny lahatsoratra aho fa hanohana hatrany ny Unity i Ubuntu ary amin'ny farany dia hitady na hamolavola hafa mitovy amin'ny gtk i Xfce, izaho manokana mijanona miaraka amin'ny xfce, mandeha tsara izy io, matotra, maharitra, afaka manao zavatra maro ianao io fa manome anao tsaratsara kokoa Ny rafitra momba an'i Gnome Tsy hitako ny ho avy noho ny mpamorona azy mpiara-miasa betsaka amin'i Microsoft noho ny tsiroko. Tena nanana ny fisalasalako tamin'i Kde aho saingy nijanona na teo aza ny fiovana sy ny revolisiona an'ny kd4. Etsy ankilany, Gnome, izay nahita azy nitana toerana tsara kokoa, dia tsy mandeha tsara.
“Betsaka no hieritreritra fa ny Elementary dia tsy inona fa ny fanoharana, fakana tahaka ny Mac OS; fa lasa lavitra kokoa izy ireo. Fantatr'izy ireo izay ataony. Mahatsapa ny fahitany manokana ny amin'ny tokony ho izy izy ireo, mametraka ny fiorenany amin'ny fiheverany ny nofinofy. "
Manaiky tanteraka an'i @anti, ny mahia dia handroaka azy amin'ny OS fanabeazana fototra, izy io dia ilay rafitra miasa vaovao GNU / Linux vaovao izay tsy ho ela akory dia hanao alokaloka _long_ mankany Ubuntu ary hamindra ny Linux Mint amin'ny toerana fahatelo mampalahelo.
Araka ny voalazanao, ny sekoly fanabeazana fototra dia tsy olana estetika fotsiny fa fomba fiasa mifototra amin'ny hevitro, tena marina ary mifantoka amin'ny fampiasana sy fampiononana ho an'ny mpampiasa farany.
Raha omaly maraina dia nasehoko ny rahavaviko ity fahagagana vaovao napetrako tao amin'ny masininy ity (miaraka amin'ny Chromium miaraka amin'ny addons toa ny AdBlock, Minimalistic Things, LastPass, Chromium Wheel Scroller, Session Buddy ary fampiharana hafa). toy ny saka te handro- hoy izy tamiko tsotra fotsiny: «nuuuh, tsara tokoa izy, mampahazo aina azy ary eo amboniny mahafatifaty !! Tsy afaka nampiasa ilay napetrakao taloha intsony aho, toa prehistorika izao! »...
"Ny nametraka ahy teo aloha" dia ny Linux Mint 13 Kanelina ary amin'ny maha-fitetezana Firefox 😛
Ary ny marina dia lafo ny tsy fametrahana azy ao anaty masininao! xD fa hey, rehefa ampiasainao tsara dia tsapanao fa mitanjaka tsy misy ifandraisany amin'ny KDE SC (izay ao amin'ny Arch dia mailaka, toy ireo andriamanitra, tonga lafatra!) ary mifantoka amin'ny fomba mahomby amin'ireo mpampiasa izay tsy mangataka tanteraka ny azy ireo. rafitra ...
Efa nanandrana nametraka Pear Linux ve ianao?
Ao amin'ny netbook AAOD255E misy RAM 2GB mahafinaritra dia lafo, apetrako ho takalon'ny Elementary ... izay mampiasa azy dia hahatsapa ny antony. Ankehitriny dia mieritreritra ny hametraka izany amin'ny solosaina finday RV408 aho ho takalon'ny Mageia x64 satria tsy azoko atao ny miasa ny wifi.
Fantatrao fa tamin'izany fotoana izany, tamin'ny endriny teo aloha dia tsy nahasarika ahy loatra izany, tsy maintsy ho noho ny voahangy!?
Eo no hijereko azy io, heveriko fa namoaka fanontana vaovao ry zareo, raha hitako fa mahaliana dia ajanoko mba hitsapana azy.
Tamin'ny fotoana nahatsiarovako fa ny iray amin'ireo zavatra nahatonga azy hiseho ho tsy mahaliana eo imasoko dia ny tsy nampidirany zava-baovao fa ny hoditra Ubuntu fotsiny, izany hoe, zavatra azon'ny rehetra nametraka an'i Ubuntu natao tamin'ny fampidirana dock tsara, sns. (Toy ny tamin'ny fotoana nampiasana ny fonosana tamin'ny hoditra Ubuntu ho MacOS X).
Eo aho manamarina azy ary milaza aminao 🙂
Hitako teo ...
Raha ny marina rehetra dia hitako fa taona vitsy miala amin'ny fanabeazana fototra izy io, na toy inona na toy inona ny sary.
Fa hey, resaka tsiro io 🙂
Izany dia nitranga taminao toa ahy tamin'ny andiany 5 teo aloha; tsy nisy dikany izany.
Araka ny nolazaiko tamin'ny hevitra iray hafa; eo anelanelan'ny tiany ... tsy misy ny tsy tiana ... ary Linux dia manana magazay be fivarotana mba hisafidianana izay mifanentana indrindra amin'ny fitaovan'ny masininao aloha, faharoa amin'ny birao tianao ary fahatelo amin'ireo fiasa sy rindrambaiko ampiasainao .
Avy any amin'ny PearLinux 6 aho izao ary mitovy amin'ny MAC mihitsy ka mamitaka ny mpampahalala ilay pejy aza; Miseho toy ny hoe ao amin'ny MAC miaraka amin'i Midori aho ... hehehe ny zavatra momba ny zavatra ... 🙂
Sisi, Midori dia manolotra an'io mpampiasa mpampiasa io (!?)
Azonao atao ny manamarina ny maso feno ao amin'ny: useragentstring.com
Hiezaka ny Elementary OS aho amin'ny virtoaly mba hahitako izay toa azy, efa nataonao izay tiako.
Heveriko fa tena kely ny hiova, hisy foana ireo olona hirotsaka hampiasa ireo fizarana sarotra indrindra, ary ireo hafa izay hisafidy ny fomba mora. Araka ny nomarihin'izy ireo dia hanohy hijaly amin'ny fitaovana manokana ho an'ny fizarana samihafa izahay. Faly
Oscar henjana dia hoy izy:
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ireo tsara indrindra novakiako tao amin'ny bilaogy tato anatin'ny volana vitsivitsy
Mamaly an'i oscar recio
Te hahafantatra ny antony DesdeLinux no tiako indrindra Nº1 ianao? Noho ny kalitaon'ny atiny navoakan'izy ireo, lohahevitra vitsivitsy mahaliana kokoa noho ny hafa fa tsy misy fako, raha te-hanana zava-misy tsy misy trano izy ireo, eto no tokony hijeren'izy ireo, tiako ny fahatsorana, ny maha-matotra, ny fikarohana, ny fahefana hanome hevitra tsy misy sivana, ny fanajana eo amin'ny toerana voalohany ho an'ireo izay mandray anjara, noho ny zavatra iray izay nisaina teo amin'ireo olona notendrena ary noho io antony io dia nanohy ny fitsidihana sy mpanaraka azy bebe kokoa isan'andro.
Ary satria tsy fahita firy ny troll. Mampamangy
Mijery ireo fanehoan-kevitra aho ary mahatsapa ho saro-kenatra amin'ny fanoratana an'io, ny sasany efa an-taonany maro ary kely fotsiny ny fotoana ananako. Na izany aza, ity zavatra hosoratako ity dia azon'ny linuxers manana traikefa bebe kokoa hahafantarana ny fomba fijerin'ireo vao manomboka mahita azy. Vaovao amin'ny Linux aho, vao 5 volana monja aho, nanomboka tamin'ny kubuntu aho izay mampiasa ny KDE ho biraonao misy anao ary nahatsiravina izany satria sarotra tamiko ny nametraka azy (tsapako tamin'io fotoana io fa mpandresy iray izay nahasosotra ahy tokoa, saika handao ny zava-bitro kely nataoko tao amin'ny linux aza aloha loatra). Tsapako fa avy amin'ny ubuntu izy io ka nanapa-kevitra ny hanandrana ny kinova 12.04 LTS aho ary tiako be dia be izany, tiako ny fotokevitra DASH, tena tiako izy io ary lasa malalako i Ubuntu, tamin'ny voalohany ny hevitry ny Ny bara firaisankina amin'ny ilany havia amin'ny birao dia sarotra ho ahy, niafenako nanafina azy io ary ny faran'ny olana is Eto i Ubuntu mba hanao zavatra lehibe, mieritreritra aho fa raha io no lehibe indrindra eo amin'ny tontolon'ny Linux dia tsy avy kisendrasendra Mahavariana ny zava-bitan'ny ekipa fampandrosoana miaraka amin'i Canonical. Raha te-hifindra monina amin'ny windows mankany Linux ianao, ny Unity avy any Ubuntu no safidy tsara indrindra !!!
Rahoviana no misy rafitra fanamarihana hiseho hevitra? Tena tsara izany.
Aiza no alehan'ny birao sy ny OS, araka ny nolazain'ny oracle Oracle tao anaty horonantsary fanadihadiana iray “Ny mikasika ny fahazoana ny haitao mangarahara ho an'ny mpampiasa dia tsindrio ny jiro ary hampandeha hazavana eo noho eo ary tsy mila fantatrao hoe inona no natao izay tonga nanodina izany fifantohana izany ”. Ka hitranga amin'ny fandrosoan'ny teknolojia rehetra miaraka amintsika na tsy misy antsika.
Isika lehilahy dia biby mahazatra, matahotra ny vaovao isika, mandray zava-baovao, matahotra ny hiova. Nanomboka ny fiainako tamin'ny Linux niaraka tamin'ny gnome 2.x aho ary ny tena nahafinaritra ahy, saingy niova ny zava-drehetra ary rehefa nanova ahy ny zava-drehetra, tsy misy antony fa avy eo mila manome zavatra iray aho fa nanandrana tetikasa kanelina tsara be aho, izao dia izao hita fa tantiko ny KDE fa taitra aho = O.
Na izany na tsy izany, ankoatry ny filozofia Unix, tiako ny filozofia Linux, ny fiarahamonina ary avelao ho andro hampijanonantsika ny famonoana tena ho an'ny kapitalisma ary mandeha milamina sy mifanohana isika rehetra raha toa ka SO Manantena aho fa ho avy ny andro rehefa tonga ny fotoana rehefa tsy eo dia miady ho an'ny patanty ary miray hina ny zava-drehetra.
Na izany na tsy izany, mandroso miaraka na tsy misy antsika ny haitao, raha mbola velona isika amin'ny volana ho avy xD na tsy mamono tena amin'ny ady isika xD Manantena aho fa ny fandrosoan'ny teknolojia farafaharatsiny ho ampahany aminy mandra-paha-hidirako amin'ny fahazarana xD
Lahatsoratra tsara, misy fotony marobe amin'ny zavatra ahariharyo fa ny vondrom-piarahamonina no hanapa-kevitra handevina birao sasany satria efa nitranga tamin'ny distro maro be taloha.
Fanamarihana: azafady noho ny accents, tsy manana fitendry voalamina tsara momba azy aho.
Hatramin'ny nifindrako toerana dia nampiasa distro tamin'ny KDE fotsiny aho, manana PC izay niaraka tamiko nandritra ny 6 taona aho ary isaky ny kinova vaovao an'ny KDE, haingana sy milamina kokoa izy io, samy hafa be amin'ireo birao birao sy OS hafa.
Miarahaba anao amin'ny lahatsoratra. Sarotra ny lohahevitra ary nahavita azy tsara ianao, anisan'izany ny faminaniana. Amin'izao fotoana izao dia misy olona maro very ao amin'ny Linux, dingana iray amin'ny fanovana maro izy ity ary sarotra amin'ny sasany amintsika ny mampifanaraka ny vaovao. Ho hitantsika izay hiafarana apetraka, ho ahy dia nandalo lalan-dàlana lava amin'ny fizarana izany aho, izay, dia nifarana tao amin'ny SolusOS.
Lahatsoratra tena tsara izy io, raha ny hevitro dia manana ho avy be ny firaisankina ary jereo fa sarotra ho ahy ny mampifanaraka, fa zavatra izay hanamafisana ny fotoana
abimaelmartell dia hoy izy:
olan'ny windows -> virus sy écran manga, olana mac -> lafo, olan'ny linux -> desktops
Tsy misy dikany eto amin'ity fiainana ity
Mamaly an'i abimaelmartell
Fanambarana tsotra loatra izany. Misy viriosy ho an'ireo rafitra telo rehetra. Ny solosaina mihitsy no lafo, ary ny Mac dia nihena tato ho ato amin'ny rafitra fiasan'izy ireo. Ary momba ny birao dia tsy afaka mitaraina ianao. Misy ho an'ny rehetra ary raha mila ny tsara indrindra ianao dia midira mivantana ary aza atsahatra ny KDE.
Ary raha tsy misy dikany ny fiainana dia tsy olako izany. Nietzsche nandoro ny lohany ampy mba hiteny fa famerimberenana ireo tranga ireo ihany.
Wow, tena tsara ilay lahatsoratra, milaza aho fa tena nahomby tamin'ny zavatra rehetra 🙂 Mampihomehy fa tsy nanonona zavatra momba ny LXDE na RazorQt ianao. LXDe noho izy efa antitra, ary RazorQt amin'ny fivoarana feno ary tsy fantatray izay ho avin'ny ho avy.
Na izany na tsy izany, tiako be 🙂
Tsy misy intsony i Windows Live Messenger: teraka ny Skype Messenger